NR Consult – Hetra – Instat – Arenamada: omena fiofanana ho matihanina ireo vehivavy tantsaha | NewsMada
Nifanaraka nanao sonia, omaly, ny NR Consult, ny fikambanana Arenamada, ny sampandraharahan’ny hetra, ary ny Ivontoerana momba ny antonanisa (Instat). Tanjona ny hanampiana ireo vehivavy any ambanivohitra ho matihanina amin’ny asa fihariana ataon’izy ireo.
Omena toerana eo amin’ny fandraharahana ny vehivavy any amba­nivohitra. Entanina izy ireo miala amin’ny tsy ara-dalàna miditra amin’ny ara-dalàna, ho matihanina amin’ny sehatra misy azy. Mano­hana vola ny fikambanana Arenamada, araka ny tetikasa arosony, ny FMFP*. Fanofa­na­na nomena ny fanamafisana ny faha­iza-manao eo amin’ny voly sy
ny fanodinana legioma any amin’ny faritra Atsi­mo Andre­fana, i Matsiatra Ambony, ary i Vatovavy Fi­tovinany. Ve­hivavy 300 mpikambana sy tsy mpikambana ao amin’ny Arenamada no mahazo fa­nampiana amin’ny sehatra misy azy ireo.
Ny NR Consult indray, mampianatra azy ireo ny lafiny fitantanana maha matihanina: ny renivola, ny fandaniana, ny tombombarotra, ny hetra tambatra, sns. “Tsara avokoa ho fantatry ny mpandraharaha ireo, mitantana orinasa madinika hampidirana azy anatin’ny ara-dalàna”, hoy Rakoto­zanany Nan­tsoina, tale jeneralin’ny NR Consult. “Entanina manokana izy ireo hanefa ny adidiny amin’ny fandoavan-ketra”. 5 000 ireo tantsaha nahazo fiofanana tamin’ny NR Consult hatramin’ny telo taona nisiany. Nampiditra hetra 5 miliara Ariary izy ireo ny taona 2020.
Hetra miditra amin’ny fanjakana
Nohamafisin’ny tale jeneralin’ny hetra, i Germain, ny fampidirana ireo olona ireo anatin’ny sehatra ara-dalàna, hampitombo ny hetra miditra amin’ny fanjakana. “Hanana karatra matihanina izy ireo hahafahana mampivelatra ny fihariana, toy ny fahazoana mindram-bola. Vita izany tamin’ny mpamboly lavanila any Sava. Tombontsoa ho an’ny kaominina ny hetra tambatra”, hoy ny talen’ny hetra, i Germain, sady nanamafy ny toeran’ny vehivavy eo amin’ny fandraharahana. Nanome toky ny Instat ny amin’ny fizarana karatra maha matihanina ho azy ireo.
Antapitrisany ny vehivavy any ambanivohitra entanina amin’ny sehatrasa samihafa, ohatra, amin’ny famokarana lohamenaka, ny fambolena, ny asa tanana, sns. Ezahina amin’izao fiaraha-miasa izao ny hampahaleo tena azy ireo amin’ny fitantanana vola sy ny adidy amin’ny fandoavan-ketra. Miara-miombona antoka amin’ny tetikasa ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra, sy ny asa tanana. Tsara tohizana any amin’ny faritra hafa izany, ahitana tantsaha maro manana ny talentany manokana.
FMFP*: Fond Malgache de Formation Profession­nelle